Mpanao trafikana sokatra: tambajotra matanjaka, manana 4X4 sy fitaovam-piadiana | NewsMada
Mpanao trafikana sokatra: tambajotra matanjaka, manana 4X4 sy fitaovam-piadiana
Par Taratra sur 01/08/2018
Tambajotra matanjaka. Izay no azo ilazana ireo mpanao trafikana sokatra any amin’ny Faritra atsimo andrefana, Androka. Mitondra fiara 4X4, miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mihitsy izy ireo handrahonana ireo Vondron’olona ifotony.
Olona tsy fanta-pihaviana, tsy mponina any an-toerana ny ankamaroan’ireo miditra any amin’ny kaominina Androka, any anaty ala, “mikarama” maka ireo sokatra ireo, na ny lehibe na ny zanany. Misy mihitsy tambajotra matanjaka tonga any an-toerana miaraka amina fiara 4×4 sy fitaovam-piadiana mandrahona ireo mba miaro izany. Efa nitondra fitarainana momba izany hatry ny ela ny Vondron’olona ifotony (VOI), saingy tsy hita izay fandraisana andraikitra avy amin’ny fanjakana.
Misy anefa ny sampandraharam-paritra momba ny tontolo iainana, ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana, nefa toa mandeha ho azy ny famoahana ireo sokatra ireo, raha ny fitarainan’ny mponina any an-toerana. Fantatra fa karazan’olona fady sokatra, tsy mikitika izany mihitsy, ireto mponina ireto. Ao anefa ireo karazan’olona hafa tsy fady ka manararaotra izany handrafaona ireo biby arovana aty amintsika ireo ny sasany amin’izy ireo. Zara raha misy 1 000 Ar ny vidin’ny iray handraisan’ireo mpanao trafika azy, nefa tsy latsaky ny 1.000 dolara (manodidina ny telo tapitrisa Ar) ny vidiny any ivelany.
Miverina indray ireo olona tratra mandrahona
Taterina amin’ny fiara ireo sokatra ireo mankany Toliara. Misy ampahany ampiakarina avy hatrany aty an-dRenivohitra. Fantatra ihany amin’ny vaovao heno ny fahatraran’ny mpiasan’ny fadintseranana azy ireo, nefa tsy hita ny tohiny… Miverina any an-toerana indray ireo olona tratra mandrahona. Midika izany fa matanjaka io tambajotra mpangalatra sy mpanondrana sokatra io matoa votsotra na efa tratra aza ny sasany amin’izy ireo.
Raha ny tao amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ohatra, efa firy ny olona tratra miaraka amina sokatra, nefa manjavona ny raharaha aty aoriana. Indrindra moa fa variana amin’ny politika ny maro amin’izao fotoana izao, sarona tanteraka, etsy andaniny, ny trafika sokatra. Hararaotin’ny mpanao izany izao tontolo politika tsy milamina izao hanondranana an-tsokosoko harena voajanahary maro avy eto Madagasikara.